Ungathola kanjani izixhumanisi eziphezulu ze-PR zangaphandle ngokusebenzisa ucwaningo lwe-backlink?
Lesi sihloko sizinikezele isihloko sokuhlola ukutholakala kokuxhumanisa kwe-market yakho ye-market niche nokuthi kanjani lokhu kubuyisa ukucwaninga kungakhulisa indawo yakho ye-SERP. Kukhona isaga esisodwa esichaza ngokugcwele umncintiswano emakethe yedijithali - "Gcina abangane bakho basondele futhi izitha zakho zisondele. "
Noma yimuphi umkhankaso wokwenza umsebenzi ophumelelayo, owenziwa ngokuyinhloko ngabachwepheshe be-SEO ochwepheshe oqala ngokucwaninga kwe-backlink nokuhlaziywa kwe-market niche. Ucwaningo lwe-backlinks ye-niche ukuncintisana lukuvumela ukuthi ukhawule ngqo imithombo ye-intanethi yakho futhi uthole okubalulekile emisebenzini yakho ye-backlink yebhizinisi engasetshenziswa ukukukhipha ngokusemthethweni.
Ama-Backlink ahlala engumgogodla we-website nokwenza kube nzima nakakhulu. I-website kufanele ithole izixhumanisi eziningana ezakhe zokwakha isigaba sayo segama elingukhiye.
Phakathi neminyaka eyishumi edlule, isakhiwo sokuxhumanisa sishintshile kakhulu futhi sithole nzima kakhulu. Ungakholelwa kulabo "ochwepheshe" abathi ukuthi ukwakha isixhumanisi ubuciko obulahlekile. Ihlala ingxenyeni ebalulekile yokuthuthukisa i-website futhi isaletha inani lokukhuthazwa kwebhizinisi le-intanethi. Into ewukuthi ukugcizelela ekukwakheni isixhumanisi kushintshiwe. Namuhla, igunya lezinsiza ezikhomba indawo yakho yiyona ndlela yokulinganisa ikhwalithi ye-backlink.
Kulesi sihloko, sizokukhombisa indlela yokuqhuba ukuhlaziywa kwe-backlink ukuncintisana nokuthi ungathola kanjani lapho umthombo wakho wewebhu ungathola khona kalula ijusi yokuxhumanisa ikhwalithi mahhala.
Yakha igunya lakho lesizinda
Ukuthola umncintiswano wakho, ungaqhuba uphenyo lwe-Google lwenkonzo olunikezwa ibhizinisi lakho. Hlola imiphumela ye-TOP10 ngomunye wemibandela yakho yokusesha ivolumu futhi uyifake kuspredishithi. Lolu hlu luzobonisa izincintiswano zakho ze-TOP niche. Ngaphezu kwalokho, ungaqhuba ukucinga kwe-Google okuhlobene: "umbuzo wakho wesizinda". I-Google izokwazisa futhi uhlu lwamasayithi ahlobene niche.
Noma kunjalo, ungaqhuba ucwaningo lwe-backlink nakakhulu ngokusebenzisa iSomalt Web Analyzer. Izokunika uhlu oluqondile lwendawo ekhuphisanayo, ekhombisa isikhundla sabo, ukuguqulwa kanye neminye imininingwane ebalulekile yezibalo ezokusiza ukuba uqonde ukuthi ungadlula kanjani umncintiswano wakho. Ngaphezu kwalokho, ungabheka ukuncintisana kwamakhasi wewebhu, kanye ne "gap lokuqukethwe" phakathi kwabo nomncintiswano.
Kunengqondo ukuhlolisisa ngabanye abaphikisana nabo be-TOP5 ukuze babone ukuthi bahlosekile yini ku-niche yakho futhi basebenze esikalini sakho.
Ukusebenzisa amathuluzi wokuhlaziya ochwepheshe, ungase futhi usethe izixwayiso ze-backlink zamasonto onke ezizobika kuzo zonke izixhumanisi zangaphandle ezitholakale ezivela ku-URL enomncintiswano.
Udinga ukuhlunga nge-URL ngayinye ye-URL yomncintiswano wakho ukuze uthole amathuba e-backlink kusuka kokuqukethwe okushicilelwe, izizinda ezixhumanisa izikhathi eziningana kwisizinda esifanayo, izixhumanisi ezabelwane phakathi kwabancintisana nabo nezixhumanisi ezifile Source .